Puntland oo qorshaysay in muddo laba bilood ka yar ay ku dhisto golayaasha toddobo degmo – Kalfadhi
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa khamiistii baahisay warqad ay ku shaacisay jadwalka dhismaha golayaasha deegaanka ee toddobo degmo oo ka mid ah gobolada Mudug, Nugaal, Bari iyo Guaradu ee Puntland.
Degmooyinka ayaa kala ah Xarfo, Galdogob, Ufayn, Baargaal, Gumbax, Isku-shuban iyo Burtinle.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in wasaaraddu ay muddo laba bilood gudahood ah ku dhamaystiri doonto dhismaha dowladaha hoose ee degmooyinkaas.
Sida caadada ka ah Puntland, odoyaasha dhaqanka ee degmooyinka ayaa hannaan saami-qaybsi qabiil ku dhisan oo hore u jiray waxay ku soo xulaan xubnaha golayaasha deegaanka ee degmo walba u jaan go’an.
Hawsha dhismaha golayaasha ayaa bilaaban doonta 31da bishan aynu ku jirno, xilligaas oo qorshuhu yahay in golaha deegaanka ee degmada Xarfo ee gobolka Mudug ay doortaan guddoonka. Degmo walba ayaa jadwalka soconaya mudada labada bilood ah ku leh maalin gaar ah, sida Xarfo.
Wasaaradda ayaa u sheegtay nabadoonnada iyo waxgaradka saxiixa leh in ay muddo shan iyo toban cisho ah ka hor ah wakhtiga jadwalka degmadooda ku qoran ay ku diyaariyaan xubnaha golaha deegaanka degmadooda ka mid noqonaya.
Khilaafaad iyo is-qabqabsi ayaa inta badan ka dhasha xullida xubnaha golaha deegaanka, marka ay timaado sida loo kala leeyahay taraha ama wareegtada xubnaha qaarkood ee beelaha ka dhexaysa iyo doorka haweenka.
Ma jiro shuruudo ay wargelinta ku lifaaqday wasaaraddu, waxaase jiray habraac hore oo lagu hubiyo tayada xubnaha golayaasha ka mid noqonaya oo wasaaraddu u diyaarisay doorashooyinka Galkacyo ee la qabtay horraantii sannadkan.